Ururka Saaxiibtinimada Finland iyo Soomaaliya
– Suomi-Somalia Seura ry
Sidoo kale inuu ka qeybqaato hirgalinta mashaariicda xoojinaya horumarka Soomaalida ee Finland iyo Soomaaliya.
Seuran kotoutumisseminaari 2015 (kulan la qabsiga wadanka Finland 2015)
Ururku wuxuu ka qeyb galaa, ka hadalka arimaha ajaaniibta iyo Soomaalida si wada shaqeyn iyo horumarin ku dhisan.
Ururku wuxuu wada shaqeyn joogto ah la sameeyaa ururada kale, hay’adaha dowlada iyo muwaadiniinta labada dal ee jecel wanaaga iyo wada noolaanshaha.
Ururku wuxuu Finland ka hirgaliyaa mashaariic quseeya horumarinta arimaha bulshada, shaqo-abuurka iyo fududeynta is wax wada qabsiga Somalida iyo Finnishka. Sidoo kale ururku wuxuu Soomaaliya ka hirgaliyaa mashaariic kala duwan oo ka kaba caafimaadka iyo faya-dhowrka deeggaanka.
Ururku gacmo furan ayuu ku soo dhaqeynayaa cidii xiiseyneysa hawlaha ururka, ka mid noqoshada ururka, fikir ku soo biirinta ururka iyo sidoo kale inay gacan ka geysato horumarinta ururka.
Dhinacyada mashaariicda ururku wuxuu gacanta ku hayaa waqti xaadirkan 4 mashruuc oo labana ay ka socdaan dalkaan Finland labana ay ka socdaan Somalia. Kuwa Finland ka socda waa mashruuca Waaberi oo kaalmeeya horumarinta ganacsiga iyo shaqo-abuurka, midka kalena waa mashruuca Caawinaad oo mar dhow bilaaban doona kana shaqeyn doona wada shaqeynta arimaha bulshada iyo xoojinta la shaqeynta ururada iyo caawinta dadka uu saameeyey korona. Labada mashruuc ee Somalia laga hirgaliyo waa Ramaad oo arimaha deeggaanka wax ka qabta iyo Daryeel oo arimaha caafimaadka wax ka qabta.
Wixii wadashaqeyn ama akhbaar is-weydaarsi ah fadlan nagala soo xiriir: inf(at)suomisomaliaseura.fi